Fizahan-tany Aostralia sy Oseania
Aostralia dia firenena mahagagan'ny tontolon'ny masoandro misy tora-pasika tsy manam-paharoa, ala tropikaly ary biby tsy manam-paharoa. Manintona ireo mpitsidika any Aostralia ihany koa ny mpizaha tany, nefa koa ireo mpizaha tany tsotra izay te hanongotra ny rano mafana ao Pasifika, dia mankafy fialantsasatra eny amoron-dranomasina fotsy amin'ny kontinanta maitso na mitaingina bisikileta mamakivaky ny ala Aostraliana.
Ny toeram-pialan-tsambo indrindra any Aostralia
Perisher Blue . Mipetraka any atsimo-atsinanana ao amin'ny valan-javaboahary nasionaly ao Kosciusko , ity toeram-ponenana ity dia toerana fialantsasatra fialantsiny ho an'ny aostraliana. 47 Ny fiaramanidina Perischer dia manome fahafahana miditra amin'ny faritra 1245 hektara rakotra ala. Toerana fialan-tsasatra efatra (Perisher Valley, Guthega, Smiggin Hole sy Blue Cow) no malaza noho ny fahamendrehany sy ny lanezy tsara, izay mahatonga ny skiing ho an'ny mpandray anjara sy ny manam-pahaizana mitovy. Ankoatra ny fiaramanidina skoto, ski, tendrombohitra ary lakan-dàlana, Perisher dia mety hivezivezy amin'ny alàlan'ny lalamby amin'ny alàlan'ny cable sy alpine, mandehandeha any amin'ny valan-javaboary fito, mankany amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana na club club.
Falls Creek . Io no toeram-pialan-tsambo lehibe indrindra any Victoria ary ny fahatelo lehibe indrindra any Aostralia. Tokony ho 4.5 ora avy any Melbourne . Ny tanàna dia mijoro eo am-pototry ny tendrombohitra, ary avy eo dia 45 minitra amin'ny fiara no ahatongavana any amin'ireo fiarandalamby. Ho fitsidihana ny Falls Creek, mila subscription ianao, izay mety ihany koa ho an'ny skiing amin'ny Mount Hofam. Noho ny fisian'ny havoana mivaingana sy mpizahatany vitsivitsy dia ity toerana ity dia tsara ho an'ny mpilatsaka an-tsitrapo sy ho an'ireo atleta antonony. Anatin'ireo matihanina, ny lalam-panorenana hollywood kokoa, izay manana toerana tsara ho an'ny freestyle, dia manana ny lazany.
Mount Buller (Mt.Buller) . Io toeram-pisakafoanana aostralianina io dia toerana telo ora miala an'i Melbourne ary ny toeram-piaramanidina maoderina indrindra any Aostralia ary iray amin'ireo toerana manan-danja amin'ny mpilalao baolina kitra sy ranomandry manerana izao tontolo izao. Fitaterana 22 dia afaka mitondra olona 40.000 isaky ny ora. Ny mpitaingina sy ny mpitaingina bisikileta dia afaka mandeha amin'ny toerana maherin'ny 300 hektara amin'ny alàlan'ny toerana sy toerana samihafa: halavoana mangatsiatsiaka ho an'ny mpandray anjara, mandeha tsara ho an'ny matihanina, lala-mitohy telo, lalan-dalamby ary fiaramanidina roa. Ankoatr'izany, ny toeram-pitsangatsanganana dia manintona marobe, fitsangatsanganana, servisy spa, programa ho an'ny ankizy. Ireo mpankafy ny fanenjehana dia afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny mpitaingina sy mpilalao snowboarder na miara-misakafo amin'ny alina. Isan-kerinandro dia misy fifaninanana bobsleigh sy fifaninanana goavam-be.
Hotham Alpine Resort . Fialamboly ara-barotra ara-barotra eo anelanelan'ny Tendrombohitra Hotham sy ny tendrombohitra mifanila amin'ny Great Dividing Range. Ny tendrombohitra dia tokony ho 350 km avaratra atsinanan'i Melbourne. Afaka mankany amin'ny toeram-ponenan'ny alpine Great Road ianao. Ity no toeram-ponenana malaza indrindra any Aostralia miaraka amin'ny fomba fijery 360 amin'ny Alps. Any amin'ny 320 hektara dia misy ny fiarandalamby haingam-pandeha, alàlan'ny fiarandalamby mivezivezy eny an-dalamby, fitsangatsanganana ary valan-javaboary ho an'ny sledding. Ireo fiaramanidina 13 dia manome fahafahana miditra amin'ireo làlana manerana ny faritany.
Thredbo . Miorina eo am-pototr'ireo tendrombohitra lanezy, faritra avo indrindra any Aostralia, i Tredbo dia malaza amin'ny lanezy mahafinaritra. Eto no tsy misy ireo làlambe lava indrindra any Aostralia ihany no hita, fa koa ny lalan-jotra, izay mihamitombo. Ho an'ny mpandray anjara dia misy lalana manokana azo antoka. Amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra dia azonao atao ny manakatra ny departemantan'ny tendrombohitra tany Aostralia indrindra any Kosciuszko.
Baw Baw . Bau-Bau dia fiara iray maharitra ora roa avy any Melbourne ary tena tsara ho an'ny fianakaviana. Eto ianao dia mahita alamindry tsara tarehy, mangotrakotra mahazatra, afaka mandeha amin'ny tsy fisiana ski, fa amin'ny sambo ihany koa, maka lesona vitsivitsy any amin'ny sekoly ski, mitaingina sambo voasambotry ny husky na mandeha mitsidika ny ala amin'ny sambokely.
Best Beach Resorts any Aostralia
Toeram-ponenana ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe (Barrage Great Barrier)
Ny harambato lehibe indrindra manerantany, izay malaza amin'ny hakantony sy ny haben'ny fahatsarany. Lehibe noho ny Wall Wall of China izy io ary ny rafitra voajanahary tokana azo jerena avy any ivelany. Misaotra ireo tora-pasika tonga lafatra sy biby mahavariana miavaka, ny Refa Barrier Great dia nanjary iray amin'ireo toerana manan-daza indrindra manerana izao tontolo izao. Ny toeram-ponenana ao amin'ireo nosy reefatra dia natao ho an'ireo tia tora-pasika sy ho an'ireo mpankafy ny asa any ivelany.
Hamilton Island . Ny malaza indrindra amin'ireo mpizahatany, dia manana seranam-piaramanidina manokana, trano fandraisam-bahiny 4 ary valan-javatry ny biby Aostraliana. Tena tsara ho an'ny diving, ny lakandranon'ny ranomasina, ny jachting sy ny jono.
Lizard Island . Ny faritra avaratra amin'ny faritra rehetra. Izy io dia mivantana eo amin'ny Great Barrier Reef, manana tora-pasika mahafinaritra, dia mety amin'ny fanjonoana sy ny fandehanana.
Nosy Bedarra . Ara-dalàna ny fialan-tsasatry ny torapasika. Ampiasao ny serivisy manokana amin'ity toeram-ponenana ity dia tsy afaka mihoatra ny 32 isaky ny fotoana. Any amin'ny nosy, afaka manofy, hanofana sambo na sambo iray ianao.
Hayman Island . Fialan-tsasatra sy lamaody ho an'ireo izay mankasitraka ny asa fanompoana amin'ny avo indrindra.
Nosy Dunk . Zoro kely kanto kely izay azonao trondro, mitaingina sambo maotera, mitaingin-tsoavaly eny an-tanàn-dehibe, milalao golf, misotro toaka ary mitsambikina miaraka amin'ny parachute. Manana klioban'ny ankizy ny nosy, ka ity safidy ity dia mety ho safidy tsara ho an'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana.
Keppel Island . Misy nosy lehibe sy tsara tarehy sy tora-pasika tsy misy fiafarana tsara ho an'ireo tsy tia mipetraka. Manolotra hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny vahiny ny toeram-ponenany: badminton, golf, volley volleyball, tennis, aerobics ary bebe kokoa.
Toerana hafa mipetraka any Australia
Palm Cove . Ity toeram-ponenana ity dia miorina amin'ny tanibe any avaratr'i Aostralia, voahodidina hazo palmie maro. Tsara ny manjono eny amin'ny vala, mandeha amoron-dranomasina, mitaingina catamaran. Ao amin'ny Palm Bay, misy hotely sy toeram-pisakafoanana maro isan-karazany, zaridaina manokana an'ny biby Aostraliana, fialan-tsasatra maro avy any.
Gold Coast . 52 km amin'ny torapasika volamena, andro 300 andro sy mpitsidika an-tapitrisany isan-taona. Io no iray amin'ireo toerana tsara indrindra hivezivezena any Aostralia. Ao ambadiky ny torapasika Surfers Paradise no misy faritra misy trano, trano fisakafoanana, trano fisotroana, klioba sy fiaramanidina. Amin'ny faritra atsimo no ahitanao ireo tora-pasika mahafinaritra: Broadbeach sandandy sy mahavariana, Burleigh Heads mamiratra amin'ny morontsiraka, Coolangatta dia fantatra ho toerana tena tiany ho an'ireo mpitaiza. Ireo valam-pirenena ao amin'ny Gold Coast Lamington sy Springbrook dia malaza amin'ny alany tropikaly, riandrano mahavariana ary fomba fijery manintona tendrombohitra.
Cairns . Any avaratr'i Aostralia akaikin'ny Great Barrier Reef no misy azy io. Ara-dalàna ny fialam-boly tia sy ny fialan-tsasatra. Eto dia hahita tampoka sy fahafahana hanofa fiaramanidina iray ianao, hivoaka any anaty ranomasina ary hankafizinao ireo saka, trozona sy sokatra amoron-dranomasina. Manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny volana Mey ny rano amoron-dranomasina dia manangom-bolo amin'ny valala misy poizina, saingy nikarakara ireo nasaina izy ireo ary nandamina toerana azo antoka ho an'ny fandroana.
Fraser Island . Ity dia nosy mahafinaritra iray mahafinaritra avy any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Aostralia miaraka amin'ny dongom-pasika, farihy vaovao ary tora-pasika volamena. Toerana tsara hivezivezena. Ny nosy dia ampidirina ao amin'ny UNESCO ary miambina tsara azy eo an-toerana, noho izany dia misy ny fizahantany "wild". Ho an'ireo tia mampionona ao amin'ny nosy dia misy hotely, trano fisakafoanana ary trano fisakafoanana.
Visa ho any Aostralia
Pink Lake any Aostralia
Zavatra mahaliana momba an'i Aostralia
Fitaterana an'i Aostralia
Ahoana no fomba handrafetana afara?
Ambasadin'i Makedonia ao Kazakhstan
Biographie an'i Will Smith
Sary miloko marefo amin'ny fantsika
Tinctura of calendula - 10 tsara indrindra fomba fitsaboana
Masira manimba ho an'ny trano
Manana rano mangatsiaka
Fikomiana ho an'ny lehilahy iray hihaino ny vadiny
Ny kisina dia mamoaka ny vavany - inona no tokony ataoko?
Sakafo fahavaratra ho an'ny ankizy
Fifandonana alohan'ny fampakaram-bady - inona no mitovy, fahatsapana, soritr'aretina
Ny vato philosophique - inona no ao amin'ny alchemy ary aiza no ahitana izany?